Home » Lahatsoratra farany farany » malaza ankehitriny » Avy aiza marina ny Coronavirus?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nanandrana ny CIA ary niverina maina. Tian'i Etazonia ny manome tsiny ny laboratoara sinoa iray noho ny fivoahany, i China kosa mihemotra ary manondro ny rantsan-tànany amin'ny laboratoara amerikana ho setrin'izany.
Niverina maina ny CIA sy ireo masoivohon'ny mpitsikilo amerikana hafa tamin'ny tatitra nataon'izy ireo momba ny nanombohan'ny COVID-19 sy ny fifandraisan'i Sina.
Nampandrenesina tamin'ny talata alina ny filoham-pirenena amerikana Biden ny amin'ny valiny tsy azo antoka tamin'ity fanadihadiana ity
Ny fanontaniana dia ary mitoetra raha toa ka nanomboka voajanahary ny Coronavirus na vokatry ny lozam-pifamoivoizana na fanandramana na tsia.
Tatitry ny CIA momba an'i Sina
Ny tombana, izay nandidian'ny filoham-pirenena amerikana Biden 90 andro lasa izay, dia manasongadina ny fanamby sarotra ataon'ny mpitantana hahazo vaovao misimisy kokoa sy fiaraha-miasa amin'ny governemanta sinoa afovoany any Beijing.
Niantso ny filoha teo aloha Trump COVID-19 ny Viru sinoas.
Tany am-piandohan'ny Virus ny World Health Organization (OMS) nidera an'i Sina tamin'ny valiny Coronavirus.
Nisalasala i Shina hizara ny rakitsoratry ny laboratoara, ny santionan'ny genomika ary ny angona hafa izay mety hanome fanazavana bebe kokoa momba ny niandohan'ny virus, hoy ny lahatsoratra iray momba ny tatitra momba ny fitsikilovana vaovao navoaka androany tao amin'ny Wall Street Journal.
Ny fehin-kevitra hatreto dia raha tsy hanome alalana data vitsivitsy i Shina dia tsy hivoaka mihitsy ny marina.
Ny Wall Street Journal dia nandrakotra ny fitadiavana valiny manerantany, ny fanarahan-dia ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny dokotera ary ny mpahay siansa any Shina sy eran'izao tontolo izao, ny vondrom-pitsikilovana amerikana, ary ny tambajotran'ireo manam-pahaizana manokana momba ny aretina, izay samy miady mafy mba hametraka andian-dahatsoratra mampiahiahy famantarana tsy mitovy. Ireto misy sasany amin'ny fikarohana lehibe.
Ny fanadihadian'ny Wall Journal dia nahita fa nanohitra ny tsindry iraisam-pirenena i Shina noho ny fanadihadiana hitany fa fanandramana hanome tsiny, nanemotra ny fanadihadiana nandritra ny volana maro, niaro ny zon'ireo vetaveta ary nanitrikitrika fa manodidina ny firenena hafa koa ny sakany.
Ny ekipa tarihin'ny OMS izay nankany China tamin'ny fiandohan'ny taona 2021 mba hanadihady ny niandohan'ny virus dia nitolona mafy mba hahazoana sary mazava ny fikarohana nataon'i Shina teo aloha, niatrika famerana nandritra ny fitsidihana iray volana, ary tsy nanana fahefana firy hanao fikarohana feno sy tsy mitanila. tsy misy ny tsodranon'ny governemanta China. Tamin'ny tatitra farany nataon'izy ireo dia nilaza ny mpanao famotorana fa tsy ampy ny porofo milaza fa mbola tsy voavaha ny fotoana sy ny toerana ary ny fomba nanombohan'ny virus.
Novakiana ny tatitra tamin'ny haino aman-jery namana sinoa: Ny masoivohon'ny Firenena Mikambana tamin'ny zoma lasa teo dia nanolotra dingana faharoa amin'ny fandinihana ny fiandohan'ny coronavirus tany Shina ary niantso Shina “Mangarahara sy misokatra ary hiara-miasa.”
Taorian'ny fanatsoahan-kevitry ny fikarohana iraisan'ny WHO-Shina fa very fotoana fotsiny ny hijerena ity teôria faran'ny volana martsa ity, ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden dia nanaraka an'i Donald Trump teo alohany ary nangataka famotopotorana hafa momba ny laboratoara biolo-monina any Wuhan.
Saingy maro amin'ireo US Biolabs ihany koa no isan'ireo ahiahiana amin'ny fivoahan'ny rano, ary maro ny sinoa nametraka fanontanina tao amin'ny Fort Detrick, laboratoara bioweapon amerikana natsangana nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny any Shina tamin'ny alatsinainy dia niantso ny World Health Organization (WHO) mba hitazomana ny toerany ara-tsiansa sy matihanina amin'ny fanarahana ny fiandohan'ny COVID-19 ary manohitra mafy ny fanaovana politika ny raharaha satria eo am-piomanana amin'ny dingana faharoa amin'ny fandinihana.
Ny masoivohon'ny Firenena Mikambana ny zoma lasa teo dia nanolotra dingana faharoa amin'ny fandinihana ny niandohan'ny virus coronavirus tany Shina ary niantso an'i Sina "mba hangarahara sy hisokatra ary hiara-hiasa."
Ny tolo-kevitry ny OMS dia tsy mifanaraka amin'ny toerana misy an'i Shina sy ny firenena maro, hoy ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny sinoa Zhao Lijian tamin'ny fampahalalana ho an'ny mpanao gazety isan'andro.
Ny drafitra ho an'ny dingana manaraka amin'ny fandinihana ny fiandohana manerantany dia tokony hotarihin'ireo firenena mpikambana araka ny nifanarahana momba ny fanapahan-kevitry ny fivorian'ny World Health 73rd, hoy i Zhao.
"Manantena izahay fa ny WHO sy ny firenena mpikambana dia minia mifampiresaka sy mifampiresaka ary mihaino tsara ny hevitra sy ny tolo-kevitry ny ankolafy rehetra ary miantoka fa misokatra sy mangarahara ny fandrafetana ny drafitry ny asa," hoy izy tamin'ny mpanao gazety, nanampy ny soso-kevitry ny WHO momba ny fiaviana ny fandinihana dia dinihin'ireo manam-pahaizana sinoa.
Ny fandalinana Origins dia olana ara-tsiansa ary mitaky fiaraha-miasa amin'ireo mpahay siansa manerantany, hoy i Zhao, raha nanameloka firenena vitsivitsy, anisan'izany i Etazonia, noho ny fanaovana politika ny virus.
Nivadika ho fikendrena ny Lab any Etazonia any Etazonia ny Sinoa.
Hatramin'ny alatsinainy tolakandro dia olom-pirenena sinoa maherin'ny 750,000 no nanao sonia taratasy iraisana ho an'ny WHO, mitaky ny hanaovana fanadihadiana amin'ny lab any Etazonia.
"Tokony hiatrika ny feon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena anisan'izany ny vahoaka sinoa i Etazonia, ary hanome kaonty mahafa-po", hoy i Zhao.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny sinoa dia niantso hatrany Washington mba hamaly ny ahiahy iraisampirenena momba ny laboratoara biolojika ary hanasa ireo manampahaizana iraisam-pirenena ho any amin'ny taniny hanadihady ny loza mety hitranga.
Ny fikarohana izay niavian'ny virus dia nanjary olana ara-diplomatika izay nahatonga ny fifandraisana miharatsy an'i Shina amin'i Etazonia sy ireo mpiara-dia amerikana maro. Etazonia sy ny hafa kosa nilaza fa mbola tsy mangarahara momba ny zava-nitranga i Sina tamin'ny andro voalohan'ny valanaretina. Miampanga ny mpitsikera an'i Sina ho mitady hanome tsiny azy noho ny areti-mandringana sy ny fanaovana politika ny raharaha iray izay tokony avela ho an'ny mpahay siansa i Shina.
Toa tsy hivoaka ny marina, raha an'arivony maro no maty isan'andro noho izay nitranga tamin'ny COVID-19.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 24